Vagari vemudhorobha reMasvingo vanopfuura chiuru vakanyorera dare reparamende gwaro kuti rikurudzire hurumende kuti iise mutemo wekuti mari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muMasvingo ishandiswe mukutenga mishina mitsva inopomba mvura sezvo iripo isiri kushanda zvakanaka.
Vagari ava vachitungamirirwa nesangano ravo reMasvingo United Residents and Rate Payers Alliance kana kan kuti MURRA, vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende, VaJacob Mundenda, vachiti vaneta nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana
pakatengwa ne kuvandudza mishina inopomba mvura kudhamu reMutirikwi.
Vanona nezvekufambiswa kwemabasa muMURRA, Muzvare Rumbidzai Magurupira vanoti danho iri ndiro chete ringapedze dambudziko remvura.
Vagari vanoti mari yedevolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudza mapaipi esuweji nekugadzira migwagwa izvo vanoti hazvina kunyanya kukokosha.
Mumwe mugari akasainawo gwaro iri, Amai Sungano Zvarebwanashe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Mishina iripo iyo yachembra inopomba mvura inosvika mamega litres makumi matatu, ayo anokwana vagari zviuru makumi mana nevashanu pazuva, asi mudhorobha rave nevagari vanopfuura zviuru zana. Vagari zana vanoda mamega litres anosvika makumi mashanu pazuva.
Studio 7, yatadza kubata mutauriri wedare VaMundenda avo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo uye
nezvetsamba iyi. Asi sangano reMURRA raratidza Studio 7, gwaro racho rine chidhindo
chedare reparamende chekutenda kuti rakagamuchirwa. Nhengo yeparamende yeMasvingo Urban, VaJacob Nyokanhete, vebato reMDC-Alliance, vati vanotsigirana nevagari veMasvingo.
Izvi zvatsigirwawo negurukota redunhu reMasvingo, VaEzra Chadzamira, vanozvazve nhengo yeparamende kuMasvingo West, vari vebato reZanu PF vatiwo.
Meya weguta reMasvingo, VaCollen Maboke, vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuru vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika mamirioni makumi matanhatu ekuAmerica kuti paitwe chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti
dambudziko remvura ripere zvachose.